Magaalada Caabudwaaq oo uu ka socdo mashruuc layrarka cad-ceeda ku shaqeeya(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Magaalada Caabudwaaq oo uu ka socdo mashruuc layrarka cad-ceeda ku shaqeeya(Daawo Sawirada)
Waxaa maalintii 3-aad Magaalada Caabudwaaq Ee Gobolka Galgaduud ka soconaaya mashruuc ballaaran, oo Magaalada looga hirgelinaayo layrarka cad-ceeda ku shaqeeya.
Mashuurcan oo ay bixisay Dowladda Norway, ayaa u soo martay Dowladda Federaalka Somaliya iyo Maamulka Galmudug, sidii looga hirgelin lahaa Magaalada Caabudwaaq.
Bulshada ku dhaqan Caabudwaaq, ayaa soo dhaweysay mashruuca layrarka cad-ceeda ku shaqeeya, oo la gelinaayo wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala Magaalada.
Suxufiyiinta, ayaa waxay tani ku macneeyeen mid sare u qaadeysa billicda Magaalada, isla-markaana ay soo yareynayso mugdiga xilliyada habeenkii ka jiray Magaaladaaasi.
Magaalooyinka Galkaacyo, Cadaado, Dhuusamareeb iyo Baledweyne, ayaa waxaa horey looga hirgeliyay mashruuca layrarka qoraxda ku shaqeeya.
Al-Shabaab oo wadada u galay Kolonyo Ciidamada Itoobiya la socdeen agagaarka Garoonka Balli-Doogle